10 Izindawo Eziphezulu Ezinezinkundla Zethenisi | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izindawo Eziphezulu Ezinezinkundla Zethenisi
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba eScotland, Qeqesha Ukuhamba Spain, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 02/10/2021)
Ophahleni lwezitaladi ezidumile eParis, noma phakathi kwezintaba zaseScotland noma i-Alps, lezi yizindawo zamaholide ezifunwa kakhulu eYurophu. Ngaphezu kwalokho, lezi 10 izindawo eziphezulu ezinezinkundla zethenisi zizokunika amandla kusuka komoya wokuqala futhi ukhuphule umdlalo wakho uye ezingeni elisha. Solo noma imibhangqwana, uzothanda lezi zindawo ezimangalisayo nezinkundla zabo zethenisi.
1. Indawo Engcono Kakhulu EFrance Enensimu Enkulu Yethenisi: I-Mouratoglou Tennis Academy
I-French Riviera ingenye yezindawo eziphezulu zeholide eFrance, ingasaphathwa eyaseYurophu. Ukubukwa kwezintaba ze-Alpine, amachibi aluhlaza okwesibhakabhaka, namabhishi anesihlabathi, izinyathelo ezimbalwa nje ukusuka kunkundla yethenisi yaseMouratoglou. Ebheke uLwandle lwase-Ionia, le nkantolo yethenisi yesimanje yindawo enhle yokuzijwayeza i-backhand yakho nabanye babafundisi abaphezulu be-tennis eYurophu.
IMouratoglou tennis academy yamukela zonke izinhlobo zabadlali kuwo wonke amazinga. Izinkantolo zethenisi zaseMouratoglou zivulwa nsuku zonke. Ngesikhathi sokuhlala kwakho ehhotela & resort, ungabhuka inkantolo eyihora ngosuku. Inkundla emangalisayo yethenisi iMouratoglou iyingxenye yomhlaba edume kakhulu I-Mouratoglou Academy futhi ngibe nabadlali bethenisi abahle kakhulu emhlabeni abazilolonga lapha futhi baqhubeka ne-spa yehhotela noma ulwandle ukuphumula nokuzikhipha.
2. Indawo Emnandi Yeholide E-Italy Enenkantolo Yethenisi: ISan Pietro Di Positano
Le nkantolo enkulu yethenisi yenzelwe izivakashi zehhotela i-Il San Pietro kuphela. Inkantolo yethenisi yezinkanyezi ezinhlanu iPositano inikeza uLwandle iMedithera kanye ne-Amalfi Coast enhle. Inkantolo yethenisi iSan Pietro isePositano, okukodwa kwe 10 izindawo ezinhle kakhulu ongazivakashela e-Amalfi Coast, nase-Italy kunjalo.
Ukuhambela e-Amalfi kuyiphupho lawo wonke umuntu. E bhishi, le amadolobhana amahle, impilo yasolwandle, nokubukwa kweposikhadi kunconywe ngezizathu ezinhle zangaphandle zezemidlalo nethenisi, ukhona ongacela okungaphezulu? Uma ukhathala ukuzijayeza umdlalo wakho, ungehlela olwandle olunamagobolondo, noma uye kokukhethekile isikebhe ride kanye nePositano ebabazekayo.
3. Tyena Best Tennis Field ENgilandi: Indlunkulu, Cornwall
Amakhova amatshe, amabhishi anesihlabathi, i-Atlantic Ocean eluhlaza okwesibhakabhaka, nezindlwana zamaNgisi ezise-moorland eluhlaza, ICornwall ingelinye lamaholidi amahle kakhulu eNgilandi. Inhlonhlo emangalisa ilungele ukuphumula ogwini lolwandle, futhi kuhle imisebenzi yangaphandle, njengemidlalo yethenisi noma yezamanzi.
ECornwall, ungakhetha kusuka 4 izinkantolo zethenisi ukudlala umdlalo omuhle. Ngokwesibonelo, IPenzance Tennis club ivulekele zonke izivakashi nabadlali kuwo wonke amazinga. Nokho, inkundla yethenisi ehamba phambili iseHeadland Hotel eNewquay. Ebheke iFistral Beach kanye ne-Atlantic Ocean, iHeadland iyihhotela likanokusho, ngezindawo ezinhle zangaphandle zokuhlala usebenza eholidini lakho olwandle olumangazayo lwesiNgisi.
4. Indawo Ehamba Phambili YeTennis eTwitzerland: Isigodlo saseGstaad
Izivakashi eziningi zingase zazi idolobha laseGstaad njengendawo emangalisa ebusika, kepha kuyinganekwane yasehlobo futhi. I Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland ziyamangalisa entwasahlobo, ngezimo zezulu ezinhle zokuhamba izintaba, ngebhayisikili, nomdlalo wethenisi. IGstaad iyindawo emangalisayo yeholide elisebenzayo eSwitzerland, ngokubukwa okujabulisayo nomoya omusha we-alpine emvelweni ozokhulisa amazinga akho wamandla phezulu.
Njengoba kushiwo ngenhla, IGstaad yindawo ephezulu yeholide le-tennis eSwitzerland Alps. Kusukela ezinkantolo zethenisi ezinenkanyezi ezi-5 eGstaad Palace resort hotel kuya eSwitzerland Open J. Inkundla yethenisi yeSafra Sarasin, kanye nesikhungo sezemidlalo se-Gstaad club, ukukhetha kukuwe, imibono ye-Alpine izolinda kuzo zonke izinkantolo ukuzivocavoca ngokuhamba kwakho nabanye babadlali bethenisi abaphambili emhlabeni.
5. Dlala iTennis Echibini Geneva, Switzerland
USerene, okuluhlaza okwesibhakabhaka nokuhlaza okwesibhakabhaka, ubuhle bemvelo obumangalisayo, ILake Geneva yindawo yamaholide enomlingo. Isimo se-Alpine ngemuva siheha izivakashi unyaka wonke, ngempelasonto enhle yokushushuluza eqhweni, noma iholide lokuphumula lentwasahlobo. Lapha, ungakhetha kusuka ezintabeni zase-Alpine noma uziphumulele echibini, kusuka ekuhlaleni usebenza noma ukuphola, noma kunjalo, oyikhethayo kuzokukwenza uzizwe uphilile futhi unamandla.
Njengoba iLake Geneva iyindawo ekahle yokuzijabulisa ngaphandle, izinkantolo zethenisi lapha zengeza ebuhleni futhi ziheha abadlali bethenisi abavela kuwo wonke umhlaba. Amahhotela nezindawo zokungcebeleka lapha zinikeza izinkantolo zethenisi ezimangalisayo, futhi izimpelasonto nazo zingajabulela eyodwa noma imibhangqwana’ umdlalo kwelinye lamaqembu ethenisi eLake Geneva. Leli gem laseSwitzerland lamukela abadlali kuwo wonke amazinga nakuzo zonke izabelomali.
ILyon iya eGeneva Ngesitimela
I-Zurich iya eGeneva Ngesitimela
EParis eGeneva Ngesitimela
UBern waya eGeneva Ngesitimela
6. Izindawo Eziphezulu Ezinezinkundla Zethenisi: Iholide LeTennis EParis
Ubungazi ukuthi inhlokodolobha enhle nenothando emhlabeni inezinkundla zethenisi ezigcinwe kahle kakhulu eYurophu. Enye yalezi zindawo ifihlwe e-arrondissement ye-12, Paris’ ikilabhu yethenisi emaphakathi. Njengoba iklabhu lifihliwe emgwaqeni wakudala waseParis, le nkundla yethenisi yesimanje iguqulwe yaba yinkantolo enkulu yethenisi isuka esitebeleni. Uma ukuthola kunzima ukukholwa woza uzibonele, njengoba le kilabhu yethenisi ivulekele wonke umuntu.
Njengoba wonke umuntu ephupha ngokuza eParis, futhi abaningi bafeza iphupho labo lempilo ende lokuhambela eParis noma ukuthuthela unomphela, idolobha ligcwele kakhulu. Ngakho-ke akumangazi ukuthi ezinye zezikhungo ezidume kakhulu eParis zikhuphukela ophahleni lwendlu. Lokhu kunjalo nasezinkantolo zethenisi, ngenkathi emazweni amaningi lezi kuyizinkambu zangaphandle, Paris, ungajwayeza ukunyakaza kwakho kuqhubeke phezulu kwesiteshi sesitimela, e-Atlantic Garden, ngokubukwa kweTour Montparnasse.
7. Dlala i-Tennis In Pikes Hotel Ibiza
Isiqhingi saseSpain sibonga kakhulu amaqembu amnandi, amahhotela okunethezeka, namabhishi. Uzomangala ukuthola ukuthi i-Ibiza inezinye ze- imibono obabazekayo eSpain. Isiqhingi esinamadwala, amabhishi egolide, nolwandle olucwebile lwakha isithombe esenza wonke umuntu akhohlwe ngokudansa ubusuku bonke. Kunalokho, bavuka nelanga, ukwamukela olunye usuku olukhulu e-Ibiza.
Ngaphezu kwalokho, ingaphandle elikhulu lesiqhingi saseSpain lenza lesi siqhingi sibe yindawo efanelekile yeholide esebenzayo. Amahhotela anikezela ngezikhungo ezinhle zemidlalo, njengezinkantolo ezinhle zethenisi. Enye yezindawo ezinhle kakhulu zomdlalo wethenisi wedwa yinkantolo yasePikes pink's pink. Le nkundla yethenisi emnandi ibuka ulwandle ngamagquma aluhlaza nxazonke nesibhakabhaka esiluhlaza ngaphezulu. Ilungele abangashadile, noma iphindwe kabili, uma ungumuntu othanda ithenisi, ke amaPikes e-Ibiza kufanele.
8. Isiqhingi saseTenuta Delle Ripalte Elba, Tuscany
Zimbalwa kakhulu izindawo zokuhlala eholidini e-Elba Island ezingenayo inkundla yethenisi. Isiqhingi i-Elba eTuscany sisolwandle, kude nemizila yesivini kanye nemizi yase-Italy, kodwa njengokuphupha nje. Isiqhingi i-Elba singenye yezindawo eziphezulu kakhulu zokuthwebula i-snorkeling eYurophu, futhi nizovuma uma usungene ngaphansi nangaphambi kwalokho, ngenkathi ubabaza isiqhingi esikhulu kunazo zonke e-Italy.
Ngakho-ke, I-Elba Island iyindawo enhle yokuphumula yangaphandle. Ukungeza ubumnandi basolwandle, ungadlala uwedwa noma ucwazimulise ithuba lokusebenzisa izithandani zakho kwenye yezindawo zokungcebeleka eziphezulu’ izinkantolo zethenisi. Njengoba kushiwo ngenhla, yonke indawo yokuhlala eholide e-Elba inikeza izinkantolo zangasese zangasese, amachibi okubhukuda, noma amabhishi azimele. Lapho ungagxuma usuke enkantolo uye olwandle ngesinyathelo esisodwa, uphila impilo enhle, nakanjani.
9. Izindawo Eziphezulu Ezinezinkundla Zethenisi: Ukuphumula KweTennis EScotland
Izinqaba, amakotishi, Imvelo yaseScotland yamawa nezindawo eziphakeme, Ukuya eScotland kubuyela ezikhathini zama-knights nezinganekwane. Ngenkathi amakotishi otshani nezigodlo ezinhle kungathintwa yisikhathi ngaphakathi, ngaphandle okuhle okuluhlaza okwanele kuhlala izivakashi namuhla. Kusukela kumachibi okubhukuda kuya ezinkundleni zethenisi, yonke imininingwane yakhelwe ukunikeza izivakashi konke abakudingayo kude nasekhaya.
Ngakho, uma ufisa umdlalo wethenisi, noma ukunyuka intaba kuze kufike ekubukekeni okuhle kakhulu kwezindawo zasemaphandleni, IScotland yindawo enhle kakhulu. Amagama ngeke adlulise ngokuphelele ulwazi lweholide eScotland uze uzibonele ubuhle. Lapho ukubo bukhazikhazi bemvelo, uzokwazisa yonke iminithi yobumnandi bangaphandle nokuphumula.
10. Iholide LeTennis Ku I-Salzkammergut Austria
Ungabhala izinkondlo echibini, ukubukela ukushona kwelanga, noStrudel. Ngokolunye uhlangothi, ungahle uthathe isitimela sezintaba saseShafberg uye eLake Wolfgang eSalzburg. Isifunda sechibi laseSalzburg sihle ngokumangalisayo futhi siyindawo enhle yamaholide ngokwemvelo. Ukubukwa kwechibi, Indawo yedlelo le-Alpine, umzila wokuhamba ngezinyawo phakathi kweSt Gilgen neSt Wolfgang kuyizindlela ezimbi zokuvuselela amandla akho.
Ngenkathi izivakashi eziningi ziza eWolfgang Lake zizophumula, empeleni iyindawo enhle yokuvakasha esebenzayo. Ngaphandle kokuhamba kakhulu, ungakwenza, isifunda sase-Austrian siyamangaza kubathandi bethenisi. Amahhotela aseSalzkammergut anezinkundla ezinhle zethenisi ezinokubukwa kwe-alpine kanye nechibi. Ngakho, uma iphupho lakho lempilo ende yiholide le-tennis e-Austria, ISalzkammergut yindawo enhle kakhulu.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele iholide elikhulu elisebenzayo. Lezi 10 izindawo eziphezulu zinokubukwa okuhle nezinkambu ze-tennis ezimangalisayo. Ngakho, ungazijwayeza umdlalo wakho wedwa noma ngokufana nabangane bakho, ukudala izinkumbulo ezimnandi ngeholide lakho elihle.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Eziphezulu Eziyi-10 Ngezinkundla Zethenisi” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fen%2Ftop-destinations-tennis-fields%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe